‘केपी ओली श्री ७ महाराज हुन्, सम्झौता कार्यान्वयन नभए २० औँ अनशन बस्छु’ | PBM News.com
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा। गोविन्द केसीले १९ औँ अनशनका क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभए फेरि सत्याग्रह बस्ने चेतावनी दिएका छन । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर डा। केसीले सम्झौता कार्यान्वयन नभए अनशन बस्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
‘सम्झौता अनुसार भएन भने २० औँ के २१ औँ अनशन हुन्छ । अरू माग पनि थपिन्छ,’ उनले भने । डा. केसी प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति आक्रोशित थिए । उनले भने, ‘ओली जिमा दम्भ छ । आफूलाई संविधानभन्दा माथि सोच्नु भएको छ । संविधान मान्नु हुन्न । अरू संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई मान्नु हुन्न । उहाँ श्री सात महाराज हो ।’
उनले वर्तनमान सरकारले विगतमा भएको सम्झौता नमान्ने र कार्यान्वयन नगर्ने मनस्थितिमा देखिएको आरोप लगाए । ‘अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौतालाई ओलीजीले उलंघन गरेका छन् । उपलब्धि पनि गुमेको छ । जनताप्रति बेइमानी गरेका छन्,’ डा. केसीले भने ।
शिक्षा स्वास्थ्यलाई राजनीतिक पार्टीले व्यापार गरेको उनले बताए । डा. केसीले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यलाई दोहोन गरेर व्यापार गरेर खाने भाडो बनाए । कम्युनिस्ट भनेर निःशुल्क स्वास्थ्य शिक्षा भनेर भोट माग्न गए । अहिले लात हान्ने काम भयो । भएको सम्झौता पनि उल्लंघन गर्ने काम भयो ।’
चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रधानमन्त्री ओलीले नै तोडमोड गरेको उनको आरोप छ । डा। केसीले आफ्नो स्वास्थ्य भन्दा ३ करोड जनताको स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण भएको बताए । सरकारसँग ८ बुँदे सहमति भएपछि चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा। कोसीको १९औँ पटकको अनशन २८औँ दिनमा अन्त्य भएको थियो । २५ असोजमा उनले अनशन तोडेका थिए ।-शिलापत्र